लिचीको दाना घाँटीमा अ,ड्कि,दा ६ महिने बालकको मृ,त्यु – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ २०, २०७८ समय: १६:३६:२१
कञ्चनपुरमा लिचीको दाना घाँटीमा अ`ड्कि`दा एक बालकको मृ`त्यु भएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर ५ सुकासालका भूपेन्द्र चन्दका ६ महिनाको छोरा वीरेन्द्र चन्दको घाँटीमा लिचीको दाना अ`ड्कि`ए`र मृ`त्यु भएको हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार बुधबार दिउँसो घाँटीमा लिचीको दाना अ´ड्एि´प´छि उनलाई महाकाली अस्पताल लगिएको थियो। उनको अस्पतालमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता एवः प्रहरी नायव उपरीक्षक अमर थापाले बताए।
यो पनि…..राजनीति नेपालको सबैभन्दा ठूलो र आकर्षक जागिर भएको छ। न योग्यता, न पढाई, न सीप, न तालीम, न ठाउँठाउँ सरूवा, न उमेरको हद, न रिटायरमेन्ट, आजीवन आर्यघाटको यात्रा नहुन्जेल ढुक्कको जागीर !
एक कार्यकालमा, सांसद बने रू ३० करोड, प्रदेश सांसद बने १५ करोड, मेयर बने ५ करोड, गापा अध्यक्ष बने ३ करोड, वडाध्यक्ष बने १ करोड खल्तिबाट खेलाउन पाईन्छ। त्यसबाहेक तलब, भत्ता, अन्य सुविधा छदैछ। अतिरिक्त, आफ्नो निकायका करोडौ अनुदान, कर, राजश्वको वर्षेनि बजेटको मालिक बनेर मान्छेलाई पछि लगाउन योजनाको काफल बॉड्न, विगत चुनाव र आगामी चुनाव खर्चको समायोजन गर्न पाईन्छ।
यत्रो घॉटीसम्म डुब्ने बजेटबाट सहर गाउभरिका एकएक मतदाता किन्दै बाचुन्जेल सदा अपराजय हुन पाईन्छ। अब बिकासको मूल फुट्दैछ, ३८ हजार जनप्रतिनिधि ज्यानफालेर देश सुखि समृद्ध बनाउन लागिपरेका छन्!
चुपचाप आलोचना बिरोध नगरी तिनका ५ वर्षे कार्यकालसम्म पर्खौं, सबै आफसे आप छुमन्तर हुनेछ। तिनलाई केही नभनी, गाली नगरी जेजे गर्न मन छ, गर्न दिऔं। त्यतिन्जेल यहॉ बस्ने कुनै काम नभए बरू कतै बिदेशतिर काजमा वा तिर्थ जान मिले गए भयो, ५ वर्ष पछि फर्कदा यो मुलुक चिन्न नसक्ने हुनेछ, लेखेर राखौं!